सिद्धबाबा सडक खण्डमा रकफल नेट प्रविधि | Mechikali Daily
सिद्धबाबा सडक खण्डमा रकफल नेट प्रविधि
Posted By: Mechi Kalion: ६ माघ २०७३, बिहीबार ०४:१०
हिउ“द वर्षात् जुनसुकै समयमा पनि पहिरो खस्ने र त्यसले सवारी आवागमन अवरुद्ध मात्रै होइन जनधनकै क्षति पु¥याउ“दै आएको बुटवल–सिद्धबाबा सडक खण्डको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम ढिलै भएपनि सुरु भएको छ । रकफल नेट प्रविधिको यो नौलो प्रयोग सफल हुन सकोस् । वर्षेनी मानवीय क्षति ह“ुदै आएको यो सडकखण्डलाई सुरक्षित बनाउन र वैकल्पिक सडकको खोजी गर्न पहिल्यैदेखि माग आएको थियो । ढिलै भएपनि जोखिम कम गर्न जुन पहल भएको छ यो सराहनीय छ । खासगरी पाल्पा क्षेत्र नं. २ का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको लामो पहलकदमी सार्थक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । उनीस“गै सरोकारवालाहरुको पहल पूरै सार्थक बन्न सकोस् ।
रकफल नेट प्रविधिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु भएपछि सडक उपभोक्ताहरु खुशी भएका छन । तराई–पहाड जोड्ने एक महत्वपूर्ण राजमार्गका रुपमा सिद्धार्थ राजमार्ग रहेको छ । यहीं राजमार्गको यो सडक खण्ड अति जोखिमपूर्ण मानिन्छ । सडकखण्डको धेरै क्षेत्र जोखिमयुक्त भएपनि जहा“ बढी जोखिमको क्षेत्र छ त्यहीं सुरक्षाको उपाय खोजिएको छ त्यो परीक्षण भनिएको छ । परीक्षणस“गै यसलाई विस्तार गरी पूरै सडक खण्डलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्छ । विश्वभर मान्छेको ज्यान लिने नवौं कारणमध्ये सडक दुर्घटना पर्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार वर्षेनी करिब १३ लाख मानिसले सडक दुर्घटनाबाटै ज्यान गुमाउ“छन् । नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्र सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युका हिसाबले बढी जोखिममा छन् । हाम्रा सडक, सवारी साधन र यात्रुसमेतका अवस्था जोखिम न्यूनीकरणतर्फ नलगाउने हो भने यो दुर्घटना अझ भयावह हुने निश्चित छ ।
विसं. २०१८ सालमा यहा“को बाटोको ट्¥याक खुलेको थियो । सिद्धबाबा निरको कुहिरे भिरमा अफ्ठेरो भएपछि नया“पटी डुम्रे सडक खण्डतिर छिटै बाटो खनिएको थियो । त्यहा“ पोखरातिरबाट र हेलिकोप्टर ल्याएका जीपहरु यताको बाटो नखुल्दै चल्न थालिसकेका थिए । २०२२ सालतिर भारतको सहयोगमा उक्त सडक खण्ड सुचारु भएको हो । कैयौं बस्ती जोड्ने यो सडक खण्ड असुरक्ष्ँित हु“दा बसाई सराइसम्मकै काम प्रभावित भएका थिए । बुटवल नगिचैको सम्भावनायुक्त बस्ती नै ओझेलमा पर्ने र त्यहा“ बसाई सराई तीव्र हुन गएको थियो । मौसमका हिसाबले पनि अनुकुलको यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि, बस्ती विकासका लागि यहीं सडकखण्ड सुरक्षित बनाउन जरुरी थियो । जुन ढिलै भएपनि सुरु भएको छ । यो काम तोकिएको समयमै पूरा हुन सकोस् ।
प्रतिबद्धता जनाउने तर, काम नहुने गुनासो आइरहेका बेला विज्ञहरुको टोलीले अवलोकन गरी कामै थालेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र सडकका सबै उपभोक्ताहरु खुशी भएका छन् । ६ वर्ष अघिदेखि सिद्धबाबा क्षेत्रमा थालिएको यो वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन सकोस् करिब ७ सय फिट अग्लो यो पहाडमा पहिरोको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सक्यो भने त्यसले बुटवल–पाल्पाका बस्ती मात्रै होइन धेरै तिरका बस्तीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । जनसंख्या दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको अनुपातका हिसाबले दक्षिण एसियामा पहिलो नम्बरमा पर्ने नेपालमा सडक सुरक्षाको जिम्मा निजी क्षेत्रको मात्रै हु“दै होइन । यसैले निजी क्षेत्र र राज्यका जिम्मेवार निकायका बीचमा सहकार्य हुन सक्यो भने दुर्घटना न्यूनीकरणको पहल प्रभावकारी हुने छ ।